Na nso nso a, ndị na-ekweghị na Chineke dị ekesaarala ọtụtụ ndị akwụkwọ ndị ha ji akọwa ihe mere ha ji kwere na Chineke adịghị. Ọtụtụ ndị agụọkwala akwụkwọ ndị ahụ, e nweekwa ndị kwe na ndị ekweghị. Otu onye sayensị aha ya bụ David Eagleman sịrị na ‘ụfọdụ ndị gụrụ akwụkwọ ndị ahụ na-eche na ndị sayensị macha ihe niile.’ O kwuziri na “ezigbo ndị sayensị na-achọ ịmata ihe ndị ha na-amaghị. Ka oge na-agakwa, ha na-achọpụtakarị ihe ndị ha na-amabughị.”
Ọtụtụ ndị sayensị ụbụrụ na-aghọ nkọ agbaala mbọ mata ụfọdụ ihe ndị ha na-amabughị gbasara ụwa anyị a. Ihe ndị ha chọpụtara tụkwara ha n’anya. Ma, o nweekwala ndị nke nọ n’ịchọ ịmata ihe ndị ha na-amaghị tinye aka n’ihe ndị na-adịghị mma. Dị ka ihe atụ, otu onye sayensị a na-anụ aha ya, bụ́ Isaac Newton, kọwara otú ikike ahụ ji ihe ndị dị na mbara igwe si jigide ihe ndị ahụ niile. Ọ bụkwa ya wepụtara usoro mgbakọ na mwepụ a na-akpọ kalkụlọs n’olu Bekee. E ji ụdị mgbakọ na mwepụ a arụpụta kọmputa nakwa ụgbọelu ndị e ji aga na mbara igwe. E jikwa ya amụ gbasara atọm. Ma, Isaac Newton tinyekwara aka n’iji anwansi eme ka ihe na-abụghị ọlaedo ghọọ ọlaedo.
Ihe karịrị otu puku afọ na narị afọ ise tupu a mụọ Newton, otu onye Grik aha ya bụ Ptolemy ji naanị anya nkịtị mụọ gbasara ihe ndị dị na mbara igwe. Ọ na-apụta n’abalị na-ele ihe ndị ahụ dị na mbara igwe ma na-agbakọ otú ha si aga, ọ bụkwa aka ochie n’ise map. Ma, o kwuru na ụwa nọ n’etiti, ihe ndị ọzọ niile a na-agba ya gburugburu. Otu onye na-amụ gbasara ihe ndị dị na mbara igwe aha ya bụ Carl Sagan kwuru gbasara ihe a Ptolemy kwuru, sị: “Mgbe otu puku afọ na narị afọ ise gachara, ndị mmadụ chọpụtara na ihe ahụ o kwuru gbasara ụwa ịnọ n’etiti abụghị eziokwu. Nke a gosiri na onye ụbụrụ na-aghọ nkọ nwere ike ịsị na ihe dị otú a na otú a, ma e mechaa, ya abụrụ na ihe ahụ adịghị otú ahụ.”
Ụdị ihe ahụ mere Ptolemy na-emekwa ndị sayensị taa. Ò nwere mgbe ndị sayensị ga-amatacha ihe niile gbasara ụwa na mbara igwe? Ọ bụ eziokwu na ndị sayensị achọpụtala ọtụtụ ihe baara anyị uru, ma, anyị kwesịkwara ịma na e nwere ọtụtụ ihe ha na-agaghị amatali. Otu onye sayensị aha ya bụ Paul Davies kwuru, sị: “A sị ka anyị kọwawa ihe niile gbasara mbara igwe na ụwa, anyị agaghị akọwali ha, ya aghara inwe ebe ọ ga-eri mperi.” Ihe a onye a kwuru gosiri na ụmụ mmadụ agaghị amatachali ihe niile gbasara ụwa anyị a. N’ihi ya, ọ bụrụ na a gwa anyị na ndị sayensị ga-akọwaliri anyị ihe niile, anyị kwesịrị iche echiche nke ọma tupu anyị ekwere.
O doro anya na Baịbụl na-emere anyị ọtụtụ ihe sayensị na-enweghị ike imere anyị
E nwere ihe Baịbụl kwuru banyere ihe ndị dị ịtụnanya dị na mbara igwe nakwa n’ụwa anyị a. Ọ sịrị: “Lee! Ihe ndị a bụ ntakịrị ihe n’ọrụ [Chineke] niile; leekwa ka ihe a nụworo banyere ya si dị ntakịrị!” (Job 26:14) Ihe a gosiri na e nwere ọtụtụ ihe ụmụ mmadụ na-agaghị amatali. Ihe Pọl onyeozi dere kemgbe ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ puku afọ abụọ gara aga ka bụ eziokwu. O dere, sị: “Lee otú ngọzi na amamihe na ihe ọmụma nke Chineke si dị omimi! Lee otú a na-apụghị ịchọpụtacha ikpe ya, na otú a na-apụghị ịchọpụtacha ụzọ ya!”—Ndị Rom 11:33.
Ihe Sayensị Na-enweghị Ike Imere Anyị
Anyị ma na anyị nwere ike isi n’aka ndị sayensị mata ihe ụfọdụ gbasara ụwa anyị a. Ma, ọ bụ Baịbụl na-agwa anyị otú anyị na ndị ọzọ ga-esi na-adị n’udo, nakwa otú anyị ga-esi na-ebi ndụ, anyị ana-enwe ezigbo obi ụtọ. Ka anyị leba anya n’ụfọdụ n’ime ihe ndị a Baịbụl na-agwa anyị.
Ihe Ga-egbochi Mmadụ Ịkpa Arụ
Ejila ndụ egwu egwu
“Egbula ọchụ.”—Ọpụpụ 20:13.
“Onye ọ bụla nke kpọrọ nwanna ya asị bụ ogbu mmadụ.”—1 Jọn 3:15.
“Si n’ihe ọjọọ wezụga onwe gị, mee ihe ọma; chọọ udo, chụsookwa ya.”—Abụ Ọma 34:14.
“A na-aghakwa mkpụrụ nke ezi omume n’ebe udo dị maka ndị na-eme udo.”—Jems 3:18.
Emela ihe ike
“Jehova na-enyocha ma onye ezi omume ma onye ajọ omume; mkpụrụ obi ya kpọrọ onye ọ bụla nke hụrụ ime ihe ike n’anya asị.”—Abụ Ọma 11:5.
“Enwerela onye na-eme ihe ike anyaụfụ, ahọrọkwala ụzọ ya ọ bụla. N’ihi na onye aghụghọ bụ ihe arụ n’anya Jehova.”—Ilu 3:31, 32.
Ihe Ga-eme Ka Ezinụlọ Na-enwe Obi Ụtọ
“Ndị bụ́ ụmụ, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n’ime Onyenwe anyị, n’ihi na nke a bụ ezi omume: ‘Sọpụrụ nna gị na nne gị’; nke bụ́ ihe mbụ e nyere n’iwu nke nwere nkwa: ‘Ka ihe wee gaziere gị, ka i wee dị ogologo ndụ n’elu ụwa.’”—Ndị Efesọs 6:1-3.
Na-akụziri ụmụ gị ihe otú kwesịrị ekwesị
“Unu emela ụmụ unu ihe iwe, kama na-azụlitenụ ha n’ọzụzụ na nduzi echiche nke si n’aka Jehova.”—Ndị Efesọs 6:4.
“Unu adịla na-akpasu ụmụ unu iwe, ka ha wee ghara ịda mbà n’obi.”—Ndị Kọlọsi 3:21.
Na-ahụ di gị ma ọ bụ nwunye gị n’anya, na-akwanyekwara ya ùgwù
“Ka onye ọ bụla n’ime unu hụ nwunye ya n’anya dị ka ọ hụrụ onwe ya n’anya; n’aka nke ọzọ, onye bụ́ nwunye kwesịrị ịdị na-akwanyere di ya ùgwù nke ukwuu.”—Ndị Efesọs 5:33.
Ime ka a kwụsị imebi ụwa
E nwere ihe Baịbụl kwuru gbasara ndị mebiri obodo Izrel n’oge ochie. Ọ sịrị: “Ndị bi n’ala a emerụwo ya . . . Ikpe amawokwa ndị bi na ya.” (Aịzaya 24:5, 6) Chineke ga-ekpe ndị niile na-emebi ụwa a ikpe. Ọ ‘ga-ebibi ndị na-ebibi ụwa.’ (Mkpughe 11:18) Ha ga-atarịrị ahụhụ ihe ha mere.
Olee Ihe Mere Ọtụtụ Ndị Jizi Ekweta na E Nwere Onye Kere Ihe Niile?
Ọ̀ bụ Chineke kere ụmụ mmadụ, ka hà si n’ụmụ anụmanụ pụta?
mailto:?body=E Nwere Ọtụtụ Ihe Ndị Sayensị Na-agaghị Amatali%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2015403%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=E Nwere Ọtụtụ Ihe Ndị Sayensị Na-agaghị Amatali